Kooxda Real Madrid oo weli xiiso u qabta xiddig ka tirsan Ajax oo ay u aragto bedelka Paul Pogba – Gool FM
(Amsterdam) 08 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay weli xiiseynayso saxiixa laacibka khadka dhexe ee naadiga Ajax, Donny van de Beek.
22-sano jirkaan ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono garoonka Bernabeu intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, Los Blancos ayaana u aragtay laacibkan bedelka ciyaaryahanka Manchester United ee Paul Pogba.
Xiddiga xulka qaranka Netherlands ayaa ugu dambeyntii sii joogay kooxdiisa Ajax kaddib waqtigii ugu dambeeyey ee loo qabtay suuqa kala iibsiga, inkastoo uu dhaliyay labo gool, isla markaana sameeyey afar caawin 7 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Jariiradda AS ee dalka Spain ayaa warinaysa in kastoo ay go’aansatay inay u diido xagaaga, Real Madrid waxay wali xiiseynaysaa inay hesho adeegga xiddigan reer Holland, waxayna bilaabi karaan inay dalab ka gudbiyaan marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan 2019-20.
Van de Beek, kaasoo heshiisiisa uu ku joogo Amsterdam uu ku eg yahay xagaaga 2022 ayaa dhaliyey 17 gool, waxaana uu sameeyey 13 caawin 57 kulan oo uu u saftay kooxda reer Dutch xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Zinedine Zidane ayaa sidoo kale la la xiriirinayey ciyaaryahanka Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes xilli dambe oo suuqa kala iibsiga ah kaddib markii ay ku guuldareysteen inay hubiyaan saxiixa Pogba oo muddo dheer diiradda u saarnaa.